အသစ်အဆန်းတွေ လုပ်လိုက်ရမှ ကျေနပ်တတ်တဲ့ G-Dragon ရဲ့ Instagram က Teaser image
On February 16, 2018 By Atsuko
Kpop King, Fashion King လို့တင်စားရတဲ့ Big Bang ရဲ့ Leader ကြီးကတော့ ဒီတစ်ခါလည်း ဘာအဆန်းတွေထွင်ဉီးမလဲမသိပါဘူး။ လုပ်လိုက်ရင် အသစ်အဆန်းတွေချည်းပဲ လုပ်တတ်တဲ့ VIP တွေရဲ့ ကိုနဂါးကတော့ ဒီတစ်ခါမှာလည်း ခန့်မှန်းရခက်တဲ့ teaser image နှစ်ခုကို သူ့ရဲ့ Instagram Account မှာ တင်ခဲ့ပါတယ်။
ပထမတစ်ပုံကတော့ “Untitled, 2017” နဲ့ “Unwrap on 28 February 2018” ဆိုတဲ့ စာသားတွေပါဝင်တဲ့ စာအိတ်ပုံလေးဖြစ်ပါတယ်။ ဒုတိယတစ်ပုံကတော့ Admin လည်း ဘာပုံမှန်းကိုမသိတာပါ ?
Fan တွေအကုန်လုံးကတော့ ဘာ Caption မှ မရေးထားပဲ ပုံလေးပဲတင်ထားတဲ့သူ့ Instagram post နဲ့ပတ်သက်ပြီး အမှန်အကန် ခေါင်းစားနေကြလေရဲ့။ အရင်တစ်ခါကလည်း ပုံအဆန်းတွေတင်ပြီး Fan တွေအားလုံး စိတ်ဝင်စားနေကြပြီဆိုမှ သူ့ရဲ့ Instagram ကပုံတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီး နောက်မှသိခဲ့ရတဲ့ အမှန်တရားက သူ့ဖုန်းမှန်ကွဲသွားလို့ အဲ့လို Filter တွေနဲ့ ထွက်လာတာပါတဲ့ ? (အယ်ကိုက အတော်နောက်တယ်နော် ?)
ကိုနဂါးတစ်ယောက် အဲ့ဒီတုန်းကတင်ခဲ့တဲ့ ပုံတွေကလည်း ဝက်ဝက်ကွဲအောင်မြင်ခဲ့လို့ နောက်တစ်မျိုးအသစ်ထွင်တာလေလား အယ်ကိုရေ။ ဉာဏ်အတော်ကောင်းပြီး attention ယူတတ်တဲ့၊ တစ်ကိုယ်လုံး အနုပညာဆိုတာတွေချည်းပဲ ဖြစ်နေတယ်ဆိုတဲ့ အယ်ကိုရေ.. Fan တွေကို အတော်ပဲခေါင်းစားပါတယ်လို့…
Fan တွေတော်တော်များများကတော့ “Untitled, 2017” ဆိုတော့ Untitled, 2014 ဆိုတဲ့ သူ့ရဲ့သီချင်းကိုပြန်ကောက်ပြီး သူ Instagram Post အောက်မှာ မေးခွန်းပေါင်းသောင်းခြောက်ထောင်နဲ့ အလုပ်ရှုပ်နေကြလေရဲ့…
ကဲ ဘာတွေဖြစ်လာဉီးမလည်းဆိုတာကိုတော့ စာအိတ်မှာပါတဲ့ Date အတိုင်း February 28 ရောက်အောင် လက်ချိုးရေတွက်နေပြီး စောင့်နေရုံမှအပ Admin လဲ မတတ်နိုင်ပါဖူးလို့။ ကြားထဲမှာကံကောင်းလို့ သူ Instagram တစ်ခုခု Update လုပ်ခဲ့ရင်လည်း VIP တို့ကို အမြန်ဆုံး အသိပေးမှာမို့ အခုတော့ Stay tuned ပါလို့…
PREVIOUS POST Previous post: Daehan, Minguk, Manseh အမွှာလေးသုံးယောက်တို့ရဲ့ Happy Lunar New Year Wish !
NEXT POST Next post: BIGBANG ရဲ့အဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးဖြစ်တဲ့ Seungri ဟာ ‘I Live Alone’ ဆိုတဲ့အစီစဉ်မှာ ပါဝင်ရိုက်ကူးဖို့အတွက် သဘောတူညီခဲ့